DAAWO: Midowga Musharixiinta oo bilaabay Abaabul Ciidan, xiisada doorashada & dagaal – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
November 27, 2021 Xuseen 5
Midowga Musharixiinta Madaxweynaha DFS ayaa bilaabay abaabulka Ciidammada “Badbaado Qaran”, kuwaas oo ah Ciidammadii bishii April ee sanadkan galay magaalada Muqdisho, kaddib xiisad ka dhalatay muddo kordhin labo sanno ah oo Madaxweyne Farmaajo uu ku darsaday.
Agaasimihii hore ee Sirdoonka Soomaaliya, Gen. Cabdiraxmaan Tuuryare ayaa sheegay in uu bilowday abaabul ay sameynayaan saraakiisha Ciidankii la baxay ‘Bad-baado Qaran’.
Sidoo kale, Midowga Musharixiinta oo caawa soo saaray War-saxaafadeed ayaa sheegay in aysan aqbali doonin doorashada boobka ah ee ka socota dalka, iyagoo ka biyo-diidsan hannaanka ay u socoto doorashada Golaha Shacabka BJFS.
Midowga Mooryaanta Qaawan iyo Tuugada u adeega Cadowga Shacabka Soomaaliyeed iyo Dowladnimada Soomaaliya.
Midow Musharaxiin waa Midowga Mooryaanta Qaawan.
Doorasho ma doonayaan nooc kasta ay tahay waayo waxaa loo soo dhiibey Mashruuc loogu tagalay in Dowladda Soomaaliya lagu Burburiyo, islamarkaana lagu hor istaago Doorashada Soomaaliya,waxaana Mashruuc u soo dhiibey Dowlado Cadow ku ah Dowladnimada Soomaaliya,islamarkaana cabsi ka qaba inuu Doorashada ku guulegsto Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo,waayo Dowkadahaas waxaay doonayaan iney helaan mid u adeega Danahooda gaarka ah, islamarkaana ah Qabiiliste aan Dan ka laheyn dad iyo dal midna sida aan soo aragnayba kuwo gatay dad nool iyo dalba.
Waxuu ku hadlayo lama fahmi karo. Yaa wadanka laga badbaadinayaa???. Sideese loo badbaadin???. Waxaa lagu heshiiyeyey doorosho dadban. Hadii odeyaashoodii ay kasban waayeen ma xabad ayey bilaabin. Yeyse u darantahay oo caano uga daadan. yaase og natiigada kasoo bixi doonta doorasha dadban ee lagu balamay????. Waagii maska madaxa laga qabanjirey la moodyey. Somalia inteeda kale uma dhutinayso xabad ka qaraxda xamar. Faaiidada ugu weyn ee federaalismku waa kaas. Dabkii meel ka bilaabmada waxuu ku ekaan goobtii uu ka bilaamaday. Waxaa fiicanba in federaalismka looga sii xuub siibto confederalism. Taasuna wey dhicin hadii federaalismku noqdo carqalad horey u socon karin oo koxo iyo shaqsiyaad u gacan galo. Wey muuqataa in federaalismkii isbaaro loo dhigtay oo hal viilo iyo ururo siyaasadeed oo jug ah u gacan gashay. dawlad dhexe warkeedaba daa oo waa tan sagxada la taagan yahay na dhigtay.
Micnaha Doorasho ma doonayaan waa iska caddahay 100%.
Ma waxaa xumaan diidaya kuwii badda gatay, kuwii dad nool dhoofiyey.
Dowladdii Soomaaliya ayaa hoggaamineysa Isbedelka weyn soo socda ?
Miyuusan mudneyn in sharciga la horkeeno waayo cidna kama sarreyso sharciga?
Wuxuu ku hadlayaa luuqaddii Qabyaaladda oo iska cad
In China they kill corrupted officials,
In Europe they imprison them but in Africa they run for RE-ELECTION !
– Qalbi- dhagax oo la gatay lana dhiibey.
– 4 dekad oo Ethiopia laga gaday loona saxiixay.
– Kaluunka badda oo 19 Company Chinese ah laga gaday loona saxiixay.
– 10000 dhalinyaro Eritrea laga gatay.
– Dilkii Ikraan.
– Dilkii shacabka ee Baydhabo.
– Ka ganacsi daroogo ( QAADKA ).
– Hanti-dhowrka oo sheegay $490M oo qasnada dowlada ka maqan.
Markii galbeed loo dhaqaaqo waxay aadayaan bari, markii la istaago way fadhiisanayaan, Yaab iyo amakaag. Nimankan wax aan kursi ahayn uma muuqdo, waxaanse la yaabanahay dalkii oo dhan waxay u yaqaanaan intaas ay ka joogaan, warbal niman yahow maalin kasta waad hanjabaysaana cirka soo dumiya hadaad awoodaan, Aduunka miyaad aragteen in halkii maxastiisu taalay dab gelinaaya. Hadii aad run sheegaysaan oo aad dad iyo dal badbaadinaysaan dadka abaaruhu hayaan ku caawiya xoolaha aad ummada ka xadeen.